Ndeapi mamiriro enzvimbo anogona kuratidzwa neprojekita?
Imba > Nhau > Indasitiri Nhau > Ndeapi mamiriro enzvimbo anogona kuratidzwa neprojekita?
1. Imba yemitambo yemhando: Hunhu hwayo ndeyekuti kupenya kwakatenderedza 2000 lumens (pamwe nekuvandudzwa kweprojekti, iyi nhamba iri kuwedzera, uye musiyano uri pamusoro), uye chiyero chechikamu cheiyo projekti skrini iri kunyanya 16: 9. Akasiyana mavhidhiyo madoko akazara, akakodzera kutamba mafirimu uye yakakwira-tsananguro TV, inokodzera vashandisi vekumba.
2. Portable e-commerce purojekita: Kazhinji, purojekita inorema zvakanyanya isingasviki 2 kilograms inogona kutsanangurwa seinotakurika purojekita yebhizinesi. Kurema kweichi chigadzirwa kunoenzaniswa nekuvandudzwa kwemakomputa akaonda uye akareruka. Izvo zvakanakira zvinotakurika mapurojekita emabhizinesi masystem idiki saizi, kurema kurema, uye kusimba kufamba. Icho chinotsiva echinyakare masiraidhi mapurojekita uye makuru uye epakati-saizi saizi mapurojekita. Iko kusanganiswa kwemabhuku matete uye akareruka kana makomputa ane bhizinesi anotakurika mapurojekiti ibhizimusi reInternet bhizinesi. Sarudzo yekutanga yevashandisi vebhizinesi kuongorora bhizinesi modhi yekambani mbozha.
3. Yemusangano musangano purojekita , Kudhura kwemitengo, kukodzera kutenga kwakawanda uye kushandiswa kwakakurumbira.
4. Mainstream engineering projekita inokodzera kwazvo dzidzo, midhiya, hurumende nedzimwe nzvimbo.
5. Professional theatre purojekita: Rudzi urwu rweprojekita runotarisa zvakanyanya kugadzikana, inosimbisa yakaderera kutadza chiyero, kupisa kupisa kudzikisira kuita, network basa, uye nyore kushandisa. Ehezve, kuitira kuti uchinjike kune akasiyana mahunyanzvi ekushandisa, chinonyanya kukosha che projekita ndiko kupenya kwayo kwakakwirira, uko kunogona kazhinji kusvika zvinopfuura zviuru zvishanu zvemwenje, uye iyo yepamusoro inogona kupfuura zviuru gumi. Nekuda kwehukuru hwayo hukuru uye huremu hunorema, inowanzo shandiswa pazvinhu zvakakosha, zvakaita semitambo, mamuseum, dzimba dzemaguta nenzvimbo dzeveruzhinji. Inogona zvakare kushandiswa mukutarisa traffic, yeruzhinji kuchengetedzwa yekuraira nzvimbo, moto nemhepo traffic yekudzora nzvimbo, nezvimwe.
6. Kuyera mapurojekita: Aya mapurojekita akasiyana nemhando dzataurwa pamusoro apa dzemapurojekita. Ivo vakadaidzwa kuti contour projekita mumazuva ekutanga. Nekuwedzera kweyeyekutsika mutongi, purojekita inoshongedzerwa ne-yepamusoro-chaiyo grating mutongi, inonziwo yekuyera projekita. Kuti uvasiyanise kubva kune echinyakare maprojekita, iwo anonzi ekuyera mapurojekita. Basa rayo guru nderekufambisa mwenje kuburikidza nezvigadzirwa zvigadzirwa kugadzira purojekita yakawedzeredzwa, uye wozoshandisa yakajairwa firimu kana grating vatongi kuona saizi yechigadzirwa. Nekuvandudzwa kwemaindasitiri, iyi yekuyera purojekita yave chimwe chezvinonyanya kushandiswa zviyero zvekuyera muindasitiri yekugadzira. Kugara uchifungidzira wakakamurwa kuita wekupima kuratidzira uye yakatwasuka fungidziro. Zvinoenderana neyakaenzana muyero, iyo yakakamurwa kuita contour projekita uye edhijitari mapurojekita.
Yapfuura:Nhanganyaya kune basa remota kutyaira rekodhi
Tevere:Iwe unonyatso kuziva mashandisiro emota dashcam? Iwe unonyatso kuziva kusarudza uye sarudza?